China M-1 Zenzekelayo Cat Litter Box Ukwenziwa kunye Factory | Ukudibanisa
I-M-1 yokuziCoca i-Cat Litter Box lukhetho olufanelekileyo kubazali bekati abaxakekileyo emsebenzini ngenxa yokuba bengakwazi ukukhathalela ikati yabo entle njengoko bekulindelwe. M-1 Cat yangasese yenziwe ngezinto ekhuselekileyo kunye nokusingqongileyo kunye nokusebenza oluzenzekelayo ukusebenza kunye nokususa deodorizing umsebenzi. Okwangoku, kuya kuba lula kakhulu ukucoca ilindle lekati.
Ingxolo ephantsi:Isilumko kunye nobuchwephesha kuyilo lwecapsule, amandla athe cwaka kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi. Ukuphefumlelwa yindawo yentsimbi, isandi esibalekayo siphantsi kune-60dB, Khusela ukuva kwekati ngokukuko, inokuvumela ikati eneentloni ukuba ikhawuleze ilungelelane.
Ukhuseleko lomsebenzi:Inkqubo yokukhusela i-aeronautical triple ijolise ekukhuseleni ukhuseleko lwezilwanyana. Uyilo oluchasene nokubhukuqa ngokufanelekileyo kuthintela iingozi ezinje ngokubhukuqa kunye nokudlula. Iya kuyeka ukubaleka kwangoko xa isiva umzimba wangaphandle, inokuchonga ngokuchanekileyo ubunzima beekati ezahlukeneyo, ayizukubaleka kude kube yimizuzwana emi-6 emva kokuhamba kwekati, ukunqanda ukoyikisa ikati.
Kulula ukusebenza:Isikrini seLCD sibonisa idatha yolungelelwaniso kunye namaqhosha omsebenzi anceda ukugqiba imisebenzi ngokukhawuleza. Indawo ekuboniswa kuyo ubuchwephesha beLCD yenza ukuba ukusebenza kwamaqhosha kube lula, kwaye idatha yesisindo sezilwanyana iboniswa ngexesha lokwenyani.
Khulula izandla zakho:Uyilo olukhulu lwendawo yeekhabhathi, lunokuqulatha ibhegi yonke yenkunkuma yekati eyi-6L, isuti yeekati ezininzi kwikhabhathi enye kunye neekati ezinkulu. Kulula ukuqaqa kwaye uhlambe, kuyacetyiswa ukuba ucoce igumbi lokucoca ngokwakho inyanga nenyanga ngokucoca nokucoca.
Akukho livumba:Isiphumo sokuhambisa deodorization kane sigcina iikati zintsha mihla le. Gcina indawo efanelekileyo yokususa deodorization, akukho sidingo sezinto ezithile zokuhambisa deodorizing, iingxowa zamalahle eziqhelekileyo kunye neengxowa zearomatherapy zinokufakwa.
25.6 x 24.8 x 26 intshi
Inkunkuma yeNdawo yokuSebenza
Ukulahlwa kwenkunkuma yekati
Omileyo 1W, Ukubaleka 6W
Egqithileyo Umatshini okondlayo oZenzekelayo weKati kunye neNja
Okulandelayo: Ibhokisi yenkunkuma yeCat-M-2 ezenzekelayo